Akwụkwọ Anavala Khandala Tour ngwugwu | Kpọọ na: + 91-993.702.7574
Ebevala bụ ugwu ugwu nke a na-akpọ aha ọlaọcha nke Sahyadri Ugwu dị nso na Mumbai na Maharashtra. Njem ngwugwu nke Lavala Khandala na-enye gị ohere ịnweta ihe dị ebube ma mara mma, na-ebu akpa jupụtara na ncheta. Otutu ihe okike na-eme ka mmiri mmiri, ndagwurugwu na ndagwurugwu na-eme ka okpukpu ala ya na ọdọ mmiri ya na-eme ka ogige paradava Sovala na ebe zuru oke na-aga site na nhụjuanya nke ndụ obodo. Njem a ga-esi n'ebe ndị ahụ na-agba gburugburu gburugburu ebe obibi akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ebe a na-eche echiche na mgbidi ndị na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Lonavala abia na ndu n'oge oge oge dị ka ime obodo na-agbanye akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na mmiri mmiri na ọdọ mmiri. Onughari nke Anavala Khandala bu ihe ndi mmadu na eche anya itinye oge n'ime ebe mara mma nke ebe obosara anyanwu. Osimiri na ndagwurugwu nke Lonavala na Khandala mara mma ma dị mma nke nwere ike ime ka njem njem gị dum dị ịtụnanya. Njem ngwugwu nke Lavala Khandala na-enye ụzọ zuru oke na ebe izu ike ebe mmadụ nwere ike inwe oge kachasị mma nke ndụ ha. Ogige ndị dị na Khandala ahụwo ịrị elu na ọdịda nke ọtụtụ alaeze ndị dị ka Marathas, Peshwas na ọbụna ikike colonial nke mba Europe. Sand Pebbles Tour N Njem na-enye 10% ego na oge nke Ụbọchị Onwe. Anyị na-enye ihe ngwugwu njem nleta nke Lavala Khandala na-adọrọ mmasị maka ndị di na nwunye, ndị enyi ma ọ bụ ezinụlọ.
Na njem anyị, ị nwere ike ịme njem ezumike nke ndụ gị nke ị nụrịrị. Anyị na-eme ka ị hụ na ị ga-enwe ahụmahụ ezumike magburu onwe ya na ncheta maka ndụ gị.
Usoro Ntugharị: 245 | Ụbọchị 03 / 04 Days